Date My Pet » Ahoana no ho Long-Distance Fifandraisana asa
Last nohavaozina: Nov. 23 2020 | 4 min namaky
Rehefa Cupid ny zana-tsipìka efa namely ny tsara toerana, na dia lavitra tsy lalao ho an'ny fitiavana. Fifandraisana mahazatra mamela ny antoko mba nifankahita saika isan'andro, na tao amin'ny tena kely indrindra nandritra ny faran'ny herinandro, raha eny ny olon-drehetra dia asa.
Tsy izany be lavitra noho ny fifandraisana.
Manontany tena inona lavitra fifandraisana? A lavitra fifandraisana, rehefa mety ho mpiara-miasa roa ao amin'ny fifandraisana ara-batana ao amin'ny toerana samy hafa, mba tsy nifankahita izy ireo isaky ny te.
Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, Mety ho mpiara-miasa ao amin'ny firenena roa samy hafa na ny kaontinanta. Na dia tsy azo atao, lavitra ny fifandraisana dia afaka manolotra tena sarotra ny fo feno fitiavana roa. Ny hany fomba ny mpivady dia afaka velona lavitra fifandraisana dia ny mijanona mifandray ara-pihetsehampo. Fa raha mbola izany-pihetseham-po fifandraisana misy, fanantenana be dia be ny. Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy, izay afaka manampy ny mpivady hankafy ny lavitra fifandraisana sy hitandrina ny fitiavany fifandraisana matanjaka.
1. Manana drafitra mafy orina momba ny fomba hiaraka
Fa ny olona roa izay mifankatia sy te-hiaraka, lavitra dia mety ho ny sakana izay ilainy mba handresy, mba hiaraka. Ny elanelana afaka ny ho tonga momba ny vokatry ny asa fanoloran-tena, na mpiara-miasa iray mandeha ny fianarany any ivelany. Amin'ny toe-javatra sasany, iray mety ho sendra nanao dia ho any an-tany hafa, ary niafara nahita 'ny iray’ fa satria tsy maintsy hiverina an-trano, lavitra olon-tiany ensues.
Ny toe-javatra izay eo ambany lavitra ny fitiavana nitranga azo samy hafa. Inona no mbola tsy tapaka tsotra na izany aza dia hoe olon-tiany lavitra tsy azo tohanana mandrakizay. Ary noho izany antony izany, ny mpivady amin'ny toe-javatra toy izany mila manana karazana drafitra ho amin'ny farany ka hiaraka hanafoana ny elanelana. Tokony hanana fizotry ny antonony voafaritra izay hanaraka sy drafitra mba hiaraka. Ary raha misy drafitra sy ny fizotry no voafaritra, Avy eo dia lasa fotsiny ny fanontaniana avy amin'ny fizakana ny lavitra, fa mahafantatra ny farany eo imasony. Planning dia mahery, ary hanatanjaka ny fifandraisana na dia teo aza ny elanelana vonjimaika.
2. mifampiresaka matetika
Fifandraisana amin'ny fifandraisana Tena ilaina ara-dalàna na dia fifandraisana izay vorona mahita ny fitiavana tsirairay imbetsaka isan-kerinandro. Communication no zava-dehibe kokoa eo amin'ny fifandraisana lavitra satria mamela ny olona hanana akaiky. Vao nandre ny feon'ny olona hafa, ahoana izy ireo ary ny zava-mitranga aminy na any am-pianarana ny asany na ny fiainana dia mety ho ampy indraindray. Ny mahazatra dia midika zavatra betsaka kokoa ao lavitra fifandraisana.
3. Aza atao hoe matetika loatra
Matetika, mpiara-miasa sasany dia mety mahatsapa fa mila mandresy ny daty lavitra be loatra amin'ny antso matetika. Fa ny marina dia tsy manampy na antoko, na afaka mandao ny mpitari reraka fahatsapana ao anatin'ny fohy ny fotoana ananany. Omeo toerana tsirairay, ary matetika miantso fa tsy matetika loatra. Fifandraisana amin'izao andro izao dia mety ho amin'ny alalan'ny SMS amin'ny maraina ary ny iray hafa amin'ny alina.
4. Nandry ny faritry
A lavitra mpivady dia tokony ho Candid amin'ny tsirairay eo amin'ny resaka izay hitsangana sy ny haavon'ny fanoloran-tena tsirairay. Ohatra, raha iarahanao samy hafa fotsiny dia tokony ho nifandray sy tsy Nihevitra. Noho ny tsy fivadihana, ny mpivady Tokony hahafantatra ny zavatra mankasitraka ny hafa na tsy mankasitraka. Raha misy mandeha amin'ny alina ho avy amin'ny namana, aoka ny mpiara-miombon'antoka hahalala mialoha ka mahatsapa ho nanome toky izay mifanohitra amin'ny azy ireo takatry ny saina amin'ny alalan'ny fantsona hafa sary toy izany ao amin'ny media sosialy avy amin'ny fiaraha-mientana ifampizarana namana.
5. Mikasa ny nifankahita tamin'ny voalohany
Manaova drafitra ny rehefa mahita ny tsirairay manaraka. Ny eritreritra sy ny fahalalana ny hahita tsy ho ela tsirairay dia tena mahery ka hiaro ny mpivady miraiki-po amin'ny samy rehefa miandrandra ny volana sy ny daty rehefa afaka mahita ny hafa, hiteny mifanatrika sy mizara miara-misakafo. Ny fahafantarana ny anankiray dia ho afaka ny hahita ny anankiray tiany dia hanamafy orina ny fatorana eo amin'ny roa, ary ampio izy ireo hitsangana noho ny famoizam-po izay matetika mampahory lavitra fifandraisana.
6. Lava antso an-tariby na ny Skype fivoriana
Ny iray amin'ireo zavatra sarotra indrindra momba ny lavitra ny fifandraisana dia tsy afaka manana ireo lava resaka izay matetika no nalaina ho toy ny fanomezana. Tantaram-pitiavana toy ny fotoana mandeha amin'ny alahady tolakandro, tao amin'ny zaridainam-panjakana, ary miresaka momba ny zava-drehetra sy ny zava-drehetra dia afaka ho lasa mora hadino. Ao amin'ny lavitra fifandraisana, ny mpivady kosa dia hahazo azy pahasalamana fa tsy mba lava uninterrupted fiovam-pony izay izy ireo dia afaka hanaisotra ny fanahiana manavesatra ny fony amin'izy samy izy, laugh, mitomany sy marina ho. Izany dia mety ho an-telefaonina na ny Skype indray mandeha, fara fahakeliny isan-kerinandro amin'ny fotoana roa tonta dia manana aina sy be dia be ho an'ny tsirairay fotoana.
7. Manorata amin'izy samy izy
Mihoatra ny antso, hafatra sy Skype, maka fotoana mba hanoratra amin'izy samy izy. Izany zava-manitra fotsiny ny fifandraisana misy eo amin'ny roa. Raha tsy nisy ny fitiavana ara-batana Nanoratra taratasy ho an'ny mpiara-miasa, dia izao no fotoana tsara tahaka ny tsy. Manorata any aminy na ny fitiavany taratasy roa mailaka sy ny snail-mail. Rehefa in lavitra fifandraisana, hisy ho gaga ara-batana tena sarobidy ny taratasy avy amin'ny olona iray ny fitiavana dia afaka ny ho.
Lavitra ny fifandraisana sy maharesy dia afaka miaritra, raha ny mpivady ihany no tena marina amin'ny tsirairay eo amin'ny fanoloran-tena ho an'ny iray hafa haavon'ny. Avy eo dia ho tsara vintana ny miakatra ambony noho ny zava-tsarotra ny elanelana. Rehetra ny soso-kevitra voalaza etsy ambony dia hanompo hatrany ny fifandraisana, fitiavana, ary ny fisakaizana velona rehefa hamakivaky ny fomba hiaraka amin'ny farany ka hanao ny hoavy.